Sharciga Okun | Maaliyadda Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | | Siyaasadda dhaqaalaha
Weligaa ma maqashay Sharciga Okun? Haddii aanad garanayn, taariikhahani waxay ka soo bilaabmeen 1982 kii wax dhistayna wuxuu ahaa Arthur Okun, oo ahaa dhaqaale yahan Maraykan ah oo muujiyey isbarbar dhig u dhexeeya heerka kobaca dhaqaalaha iyo heerka shaqo la’aanta.
Laakiin ma jiraan wax badan oo laga ogaado sharcigan? Runtu waxay tahay inay sidaas tahay, marka waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sii waddo akhrinta oo aad ogaato sharci sharxaya waxyaabo badan oo la xiriira dhaqaalaha iyo shaqo la’aanta ama shaqo abuurka.
1 Waa maxay Sharciga Okun
2 Waa maxay qaacidada sharciga Okun
3 Waa maxay sharciga Okun?
4 Waa maxay sababta uu u dhaqmo si ka duwan dalalka dhexdooda
4.1 Macaashka shaqo la'aanta
4.3 Sharciyada shaqada
4.4 Dalabka dibadda
4.5 Dhibaatooyinka xagga wax soo saarka iyo kala duwanaanshaha
Waa maxay Sharciga Okun
Sharciga Okun waa fikrad lagu qeexay 60 -yadii Arthur Okun oo ah dhaqaaleyahan Mareykan ah. Tani waxay heshay xiriir ka dhexeeya heerka shaqo la'aanta iyo wax soo saarka waddan. Tani way soo baxday lagu daabacay maqaal, "GNP Awoodda leh: Cabbirkeeda iyo Muhiimadeeda."
Halkaas, Okun wuxuu ku sheegay, haddii la ilaalin lahaa heerarka shaqada, dhaqaaluhu waa inuu kobci jiray inta u dhaxaysa 2,6 iyo 3% sannad walba. Haddii aan la gaarin, taasi waxay sii kordhineysay shaqo la'aanta. Intaa waxaa dheer, waxay dhidibtay in, haddii waddan uu ku guulaysto inuu sii hayo 3% kobaca dhaqaalaha, shaqo la’aantu ay ahaan lahayd mid deggan, laakiin si loo yareeyo, waxaa lagama maarmaan ahayd in mid kasta oo ka mid ah shaqo la’aanta la kordhiyo laba dhibcood.
Waxa laga yaabaa inaadan ogeyn in "sharcigan" uusan macquul ahayn in la caddeeyo. Dhaqaale -yaqaanka wuxuu adeegsaday xogta laga soo bilaabo 1950 oo kaliya Mareykanka, wuxuuna dejiyay aragtidan isagoo ku dabaqaya kaliya heerka shaqo la'aanta inta u dhaxaysa 3 iyo 7,5%. Iyada oo ay taasi jirto, haddana runtu waxay tahay in xeerarkii uu Arthur Okun bixiyay ay ahaayeen kuwo sax ah, waana sababtaas sababta weli loogu isticmaalo dalal badan.
Si kale haddii loo dhigo, sharciga Okun wuxuu inoo sheegayaa in haddii dhaqaalaha waddanku kobco ay la macno tahay in shaqaale badan la qoro maadaama loo baahan doono shaqaale xoog badan. Tani waxay saamayn doontaa shaqo la'aanta, hoos u dhigaysa. Taas lidkeeda; haddii ay jirto dhibaato dhaqaale, markaa shaqaale yar ayaa loo baahan doonaa, taas oo kor u qaadi doonta shaqo la’aanta.
Waa maxay qaacidada sharciga Okun
La Qaaciddada sharciga Okun kani waa:
Tani waa wax aan macquul ahayn in la fahmo, laakiin haddii aan kuu sheegno waxa qiima kastaa tilmaamayo, waxaan heli doonnaa:
Y: waa kala duwanaanshaha wax soo saarka dhaqaalaha. Si kale haddii loo dhigo, farqiga u dhexeeya GDP -ga dabiiciga ah iyo GDP -ga dhabta ah.
Y: waa GDP -ga dhabta ah.
k: waa boqolkiiba sannadkii kobaca wax -soo -saarka.
c: arrin la xiriirta isbeddelka shaqo la'aanta oo leh kala duwanaanshaha wax soo saarka.
u: isbeddel ku yimaada heerka shaqo la'aanta. Taasi waa, farqiga u dhexeeya heerka shaqo la'aanta dhabta ah iyo heerka dabiiciga ah.
Waa maxay sharciga Okun?
In kasta oo aan hore uga wada hadalnay, runtu waxay tahay in sharciga Okun uu yahay aalad aad u qiimo badan. Waana mid u oggolaanaysa saadaalinta isbeddellada u dhexeeya GDP -ga dhabta ah iyo shaqo la'aanta. Maxaa ka sii badan, waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo waxa ay noqon doonto kharashka shaqo la'aanta.
Hadda, inkasta oo aan nidhaahno waa mid aad u qiimo badan, runtu waxay tahay in xogta la helay, marka la barbar dhigo tirooyinka ku jira dunida dhabta ah, ay khaldan yihiin. Waayo? Khubaradu waxay u nisbeeyaan waxa loogu yeero "Okun coefficient."
Mid ka mid ah dhibaatooyinka sharcigani leeyahay ayaa ah in marka sicirradu muddo dheer yihiin, natiijooyinka la qaloociyo oo ay khaldan yihiin (waa sababta muddada gaaban u yeelan karto heer saxnaan sare).
Markaa ma fiicantahay mise waa xun tahay? Dhab ahaantii ma u adeegtaa ujeeddadeeda? Runta ayaa ah haa, laakiin leh waxyaabo badan. Kaliya marka la fiirinayo in la falanqeeyo isbeddellada muddada gaaban ee u dhexeeya GDP-ga dhabta ah iyo shaqo la'aanta ayaa xogta la aqbali karaa oo ay adeegsan karaan falanqeeyayaasha. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay tahay mid dheer, arrimuhu way is beddelaan.
Waa maxay sababta uu u dhaqmo si ka duwan dalalka dhexdooda
Bal qiyaas laba dal oo isku xog ah. Waa iska caadi inaad ku fikirto, haddii aad adeegsato qaaciddada sharciga Okun, natiijadu waa isku mid Laakiin ka waran haddii aan kuu nidhaahno ha yeelin?
ka Wadamadu, in kasta oo ay isku xog iyo hay’ado hay’adeed leeyihiin, haddana way kala duwan yihiin. Taasna waxaa sabab u ah waxyaabaha soo socda:
Macaashka shaqo la'aanta
Ka soo qaad in marka aad shaqo raadinayso lagu siiyo lacagta shaqo la'aanta. Lacagtaas ayaa laga yaabaa inay yar tahay, laakiin sidoo kale way weynaan kartaa, taasoo dadka ku keenta inay "la qabsadaan" inay lacag helaan iyagoo aan waxba qabanin waxayna aakhirka raadin doonaan shaqo yar.
Tani keligeed kuma tilmaamayso waqtiga, laakiin waxay ku saabsan tahay muddadii heshiisyada. Marka heshiisyo badan oo ku -meelgaar ah la sameeyo, bilow iyo dhammaad, waxa kaliya ee keena waa inay jiraan tirooyin cajiib ah marka ay timaado burburinta iyo abuurista.
Waxayna saamayn doontaa qaaciddada, gaar ahaan GDP -ga iyo heerka shaqo la'aanta.
Shaki kuma jiro in sharciyadu yihiin seef laba af leh. Dhinaca kale, waxay gacan ka geystaan ​​ilaalinta shaqaalaha. Laakiin waxay sidoo kale sababaan heerka shaqo la'aanta inay gasho meerto dhaqaale. Qiimaha dabkaas, haddii ay hooseeyaan, ayaa ka dhigaysa shirkaduhu inay shaqaalaysiiyaan dad badan si aan habboonayn, hawlo gaar ah.
Sida uu qabo sharciga Okun, Marka dhaqaalaha waddanku ku tiirsan yahay waaxda shisheeye, waxay u egtahay inay leedahay dhibaatooyin ka yar shaqo la'aanta hoos u dhac.
Dhibaatooyinka xagga wax soo saarka iyo kala duwanaanshaha
Bal qiyaas in dadaalladu ay ku wajahan yihiin hawl keliya. Hadda, halkii aad ka heli lahayd mid, waxaad leedahay 10. Xaaladee ayaad ku dareemi doontaa wax soo saar badan? Waxa ugu badan ee caadiga ah ayaa ah in haddii aad naftaada u hibeyso hal shay oo kaliya, aad ku takhasustay. Laakiin haddii ay jiraan wax badan, arrimuhu way is beddelaan.
Way cadahay in Sharciga Okun waa aalad wanaagsan oo loogu talagalay dhaqaalaha iyo macroeconomics. Laakiin waa in lagu qaataa hadhuudh cusbo ah maxaa yeelay natiijooyinka mar walba ma aha kuwo dhab ah, kuwa dhow iyo kuwa fogba. Taasi waa sababta noocyada kale ee arrimaha saamayn kara ay tahay in la tixgeliyo. Miyaad hore u ogayd sharcigan? Shaki ma ku jiraa oo aan kuu caddayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Sharciga Okun
Waa maxay CNMV
Xigashada André Kostolany